....ပိတောက်တွေ တစ်ကယ်ပွင့်မှာလား …. ~ မိုးညိုသား
....ပိတောက်တွေ တစ်ကယ်ပွင့်မှာလား ….
2:39 AM ကဗျာ No comments
အသစ်တွေကို ချစ်တဲ့ စိတ်နဲ့ 
ငါအခုထိ အတိုက်အခံ လုပ်နေတုန်းပဲ
ဘယ်အရာဟာ ဘယ်နေရာမှာ မြစ်ဖျားခံ ခဲ့ပါလိမ့်
ဘာပဲပြောပြော အားလုံးအခု ပြင်းပြနေပြီ
မင်းကော ငါကော ကမ္ဘာကြီးကော
ပြင်းပြင်းပြပြ ကြီး ပြင်းပြနေပြီ
ဘယ်သူဘာဆိုတာကို ဘွားခနဲ မြင်ရဖို့
ဟောဒီ့လောကကြီး ကို ပိတ်ပစ်လိုက်ဖို့ လိုမယ်
လွင့်နေတဲ့ တိမ်ကလေးကို ချစ်တယ်
ပွင့်နေတဲ့ ပန်းကလေးကို ချစ်တယ်
လွမ်းဖို့အတွက်ဆို ငါ့မှာ ဇရှိတယ်
ငါ့ကဗျာက ခုမှ လေးဘက်တွားနေတုန်း
ဝင်သက် နဲ့ ထွက်သက်က
သဟဇာတ မဖြစ်ရတဲ့ အခါ
မင်းကို သတိရခြင်းနဲ့ 
ပဋိပက္ခ မဖြစ်အောင် ညှိရတယ်
မင်းရှိတဲ့ ဘက်ကို ယိမ်းတယ်
မင်းယူတဲ့ ဘက်ကို ညွှတ်တယ်
သီချင်းတွေ အားလုံးကောင်းလွန်းခဲ့တဲ့ အခါ
အခု ဖျော်ဖြေ ဖို့ အလှည့်ကျသူကတော့
အစုန် နဲ့ အဆန်ကြား
မင်းနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ခြားနားခဲ့ရတဲ့
( ယွန်းပိုးဖြူရဲ့ )
ဂြိုဟ်ပြာကြီး ရဲ့ တစ်နေရာ
ပိတောက်တွေ တစ်ကယ်ပွင့်မှာလား…..။ ။